သြဂုတ်လ 3, 2011 တွင် 2:00 နံနက်
သြဂုတ်လ 3, 2011 တွင် 2:09 နံနက်
သြဂုတ်လ 3, 2011 တွင် 2:33 နံနက်
သြဂုတ်လ 3, 2011 တွင် 7:08 နံနက်
သြဂုတ်လ 3, 2011 တွင် 12:05 ညနေ
သြဂုတ်လ 3, 2011 တွင် 2:57 နံနက်
Updata latest vision, noted “ကျနော်တို့ကထောက်ခံမှာ in-့ Cache memory အင်ဂျင်ကိုတွေ့ရှိရန်မစွမ်းနိုင်ခဲ့ကြသည်, တဦးတည်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်နိုင် install လုပ်ပါ. ” What’s wrong with it? Why in 0.7.5 is OK?
သြဂုတ်လ 3, 2011 တွင် 7:09 နံနက်
သြဂုတ်လ 8, 2011 တွင် 2:35 ညနေ
သြဂုတ်လ 15, 2011 တွင် 12:16 ညနေ
သြဂုတ်လ 15, 2011 တွင် 12:43 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 3, 2011 တွင် 2:47 နံနက်
title can get the translated tile, but the description just get the original one.. What should I do? ကျေးဇူးတင်ပါသည်?
စက်တင်ဘာလ 6, 2011 တွင် 3:22 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 20, 2011 တွင် 11:35 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 20, 2011 တွင် 5:19 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 20, 2011 တွင် 11:24 ညနေ
ကျွန်တော်သဘောတူသည်, this isafeature that we should be adding in the future.
စက်တင်ဘာလ 21, 2011 တွင် 5:35 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 21, 2011 တွင် 6:08 ညနေ
Donald Shane ကပြောပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 22, 2011 တွင် 1:29 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 11, 2011 တွင် 1:12 နံနက်
ဟုတ်ကဲ့, it is quite useful, different location for caching but also makes an improvement
စက်တင်ဘာလ 26, 2011 တွင် 5:42 ညနေ
In the end, I put myself through the pain barrier and asked the host admin to install APC, which he did without any fuss, and now not only Transposh but the whole site is running likea“stabbed rat”… excellent! The overall improvement in the site’s first page load-time from APC is quite spectacular in that it was already quite fast. It’s now down from 2.7 seconds to 1.3 စက္ကန့်. And Transposh is doing its usual excellent job and playing its part in that, not delaying page loads whatsoever, so other languages are just as fast as the English default. ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်.
စက်တင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 6:36 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 11, 2011 တွင် 11:43 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 3, 2011 တွင် 6:34 ညနေ
ဝမ်းနည်းပါတယ်, but bing translator seems NOT working in the transposh plugin
အောက်တိုဘာလ 11, 2011 တွင် 11:44 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 12, 2011 တွင် 12:48 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 9, 2011 တွင် 5:06 ညနေ
hi, thanks for this wonderful plugin, အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ဖြစ်တယ်, but I have one question:
My WP and tp default language is spanish, with translation to english and german working fine. If (ဥပမာအားဖြင့်)agerman user posts in german, and I switch back to default spanish, the post does get translated.
ဥပမာ. http://mysite.com/my-post?edit=1 does not show me the translation icons (green, amber, pink)
အောက်တိုဘာလ 11, 2011 တွင် 11:46 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 12, 2011 တွင် 1:11 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 13, 2011 တွင် 5:21 ညနေ
<span id="tr_169" class="tr_" data-orig="Geschirrspülmaschine" data-source="0" data-token="R2VzY2hpcnJzcMO8bG1hc2NoaW5lIHZvbiBXaGlybHBvb2w,">Dishwasher</ထွာ>
<span id="tr_3" class="tr_" data-orig="¿Y en que parte del código lo pongo" data-srclang="es" data-source="0" data-token="wr9ZIGVuIHF1ZSBwYXJ0ZSBkZWwgY8OzZGlnbyBsbyBwb25nbw,,">နှင့်, in what part of the code I must putting it</ထွာ>
နိုဝင်ဘာလ 11, 2011 တွင် 12:16 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 11, 2011 တွင် 3:34 နံနက်
မင်္ဂလာပါကျနော်ကိုဆက်ကပ် & တာရိန်းစ်,
– When I click to Transposh setting, it appears: “ကျနော်တို့ကထောက်ခံမှာ in-့ Cache memory အင်ဂျင်ကိုတွေ့ရှိရန်မစွမ်းနိုင်ခဲ့ကြသည်, တဦးတည်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်နိုင် install လုပ်ပါ. Transposh အကူအညီ Check” . What’s wrong? I’m using W3 Total Cache plugin for caching.
ယခု, how can I do?
အောက်တိုဘာလ 11, 2011 တွင် 11:49 ညနေ
That’s the help I can give you with the information you provided, ကံကောင်းပါစေ
အောက်တိုဘာလ 11, 2011 တွင် 7:44 နံနက်
i use this plugin since 1 နှစ်ပေါင်း.
translate stop for example in2second since2ရက်ပေါင်း, if i send my text or open my site. i muss wait5minute and it translate some text then stop again and i repeat it
အောက်တိုဘာလ 11, 2011 တွင် 11:51 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 1, 2011 တွင် 12:38 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 10, 2011 တွင် 11:34 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 15, 2011 တွင် 11:23 နံနက်
…tutto bene ora, ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
…resta sempre il fatto che in alcuni punti del sito (come nei widget della home) il [tp no_translate ="နှင့်"][/tp] non funziona!
claudio castelli ကပြောပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 4, 2011 တွင် 7:49 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 4, 2011 တွင် 8:01 ညနေ
You have done the opposite of what you should have done, မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို – it is still translating but google is makingavery tough limit.
နိုဝင်ဘာလ 4, 2011 တွင် 8:05 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 4, 2011 တွင် 8:16 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 5, 2011 တွင် 10:13 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 5, 2011 တွင် 10:45 နံနက်